Lavazza Idola Mashiinka Qaxwaha - Joornaalka Naqshadeynta
Mashiinka Qaxwaha Xal qumman oo loogu talagalay dadka jecel qaxwada ee raadinaya khibrad espresso Talyaani ah oo guriga ku habboon. Muuqaalka taabashada ee xasaasiga ah ee taabashada leh ee jawaab celinta acoustic wuxuu leeyahay afar xulasho iyo shaqo kor u qaadis heer kul ah oo bixiya khibrad ku habboon oo loogu talagalay dhadhan kasta ama munaasabad kasta. Mashiinku wuxuu muujinayaa biyo maqan, weel caps buuxa ah ama lagama maarmaanka u ah soo dejinta iyada oo la adeegsanayo astaamo iftiin dheeri ah iyo saxarada dhibicda si dhib yar ayaa loo sixi karaa. Naqshaddu waxay ku dheehantahay niyad furan, dusha sare ee tayada leh iyo faahfaahin faahfaahsan waa isbeddel ku yimid luqadda qaab dhismeedka Lavazza.
Magaca mashruuca : Lavazza Idola, Magaca naqshadeeyayaasha : Florian Seidl, Magaca macmiilka : Lavazza.
Mashiinka Qaxwaha Florian Seidl Lavazza Idola